Iningi lethu bavaleleka ngaphansi kwegama "isikhathi." Cabanga ezimnandi Fairy mayelana nokuthi kwenzekani protagonist, lapho ngaphansi kwethonya ngeziphonso. Akasekho ngokwako, bese uba inceku, esivikelekile futhi ukulawuleka.
Iziphonso asikhumbuza izinhlelo zokusebenza. Bagijima anekhodi idatha ifomula, futhi usebenza ku sasilokhu. Awunazo intshiseko, ubuqotho, umoya, futhi ngaphezu kwakho konke, unembeza.
Ukuqonda ukubaluleka isikhathi ithumba esintwini. Siphila iwashi: amakhalenda, umcimbi Planner, isikhathi amakhadi, abagqugquzeli ... Sine iwashi egumbini ngalinye, amafoni ethu, ama-laptops, ngisho emotweni. Asazi ukuhlangabezana abantu emhlanganweni engasekelwa oyi-wahlela, futhi ngisho noma zenqane omunye ngengozi, ingxenye enkulu asinawo isikhathi sokukhuluma, hamba ikhofi, njll Ukucabanga ngakho - futhi kukhona kuvisisa Eckhart Tolle, ukuthi isikhathi kohliso, futhi empeleni kuphela "lapha" futhi "manje."
Umqondo isikhathi luyashelela futhi ukhohlisa kithi. Siphila esikhathini esizayo, ngakho ukugwema lesi. Kodwa uma senza akhona manje, kodwa ikusasa - liphinde eziningi ". Manje"
Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu - ungumdali wokuphila yakho siqu, into esemqoka - nje ukuphila. Man uba isigqila isikhathi ngicabanga ngalokho kusho ukuthini usuku, ngenkathi yonke imvelo ezungeze, izitshalo nezilwane, awazi ukuthi singakanani isikhathi akabuswa ihora futhi basuke bengazi ukuthi ngenyanga egcekeni.
Nqoba ukwesaba kwakho
Homo sapiens - uhlobo kuphela isikhathi. Ngenxa yalokhu, futhi kukhona omunye ukwesaba enkulu ezaziwayo: isikhathi enkingeni.
Kodwa uma singagqashula le imilingo ezimpilweni zethu, izingqondo zethu uthuthuke ngokomoya futhi siyokwazi ukuqaphela ngokwabo, kuyilapho ukuzazisa kwethu, ngakolunye uhlangothi, uzochitheka.
Ukuqagela ku ozithandayo ekhulwini lama-21
Ukuqagela ekubhapathizweni - Echoes of esidlule
Uba kanjani umzimba nezimo futhi ngilulekela